Tetikasa Fandikanteny: Fanambarana Fiarovana Ny Fahalalahan’ny Aterineto Ankapobeny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Novambra 2012 9:18 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Português, Swahili, Italiano, عربي, Deutsch, srpski, বাংলা, polski, 繁體中文, 简体中文, Català, አማርኛ, 日本語, فارسی, 한국어, English
Nandritra ity herinandro manontolo ity, handika fanangona-tsonia amin'ny aterineto ho fiarovana ny zon'olombelona amin'ny aterineto sy handrisika ireo governemanta mpikambana ao amin'ny Firaisambe Iraisam-pirenena misahana ny Fifandraisan-davitra mba hitandro ny fisokafan'ny aterineto mandritra ny fivoriamben'ny UIT ireo mpilatsaka an-tsitrapo mpandika teny Lingua ato amin'ny Global Voices.
Misokatra ho an'ny tsirairay na fikambanana ao amin'ny fiarahamoni-pirenena soniavina ny fitakiana “Protect Global Internet Freedom statement” (Fanambarana Fiarovana ny Fahalalahan'ny Aterineto ankapobeny) izay mivaky toy izao manaraka izao:
Raha hanasonia ny fangatahana, tsidiho ny habaka Protect Global Internet Freedom. Ampidiro ny anaranao, ny fanampin’anarana, adiresy mailaka, ny anaran’ny fikambanana (raha manao Sonia amin’ny anaran’ny fikambanana na fiarahamonim-pirenena ianao), rohin'ny fikambanana, ary fanteno ny firenena misy anao.
Alefa ao amin’ny tranokalan’ny fitakiana avokoa ny dikateny rehetra, izay ny OpenMedia, vondrona Kanadiana miaro ny zo nomerika no mampiantrano izany.
Arakaraka ny ivoahan'ny dikateny (jereo eo ambony), no iangaviana anao ho tsy misalasala mizara ny rohy ao amin’ny tambajotra sosialy sy amin’ny namanao.
Tantaran'ny Fitsipika farany
28 Novambra 2019Pakistana
11 Oktobra 2019Zambia